Affenpinscher - Ihe ichere anya na nkịta nkịta a - Dịrị
Taa Affenpinscher nwere ike ịchọpụta mmalite ya site na nkịta ndị si na Germany.
Nkịta ndị anyị nwere ike ịkọwa dị ka Affenpinschers taa, apụtawo na ọrụ osise German nke malitere na narị afọ nke 16: na-egosi ha dị ka ndị na-eri ọnụ na ndị ibe. Agbanyeghị, dị ka ọ dị n'ọtụtụ ụdị, ọ nweghị ndekọ ederede a pụrụ ịdabere na ya nke ụdị ahụ ruo na ngwụsị narị afọ nke 19.
N'oge a, ọ dị ka e nwere anụ ụlọ ndị nwere ntutu abụọ nwere ntutu. Largerdị buru ibu, nke ogologo ogologo ma nke pere mpe, nke gbara gburugburu, nke dị mkpụmkpụ ma nwee agba agba a ma ama. O doro anya na ụdị buru ibu mechara bụrụ Miniature Schnauzer, obere wee bụrụ Affenpinscher.
Na 1902, a gbalịrị ide nke mbụ “Affenpinscher Breed Standard”, nke ndị Berlin Lapdog Club dere. N'ihi ọdịdị adịghị ọcha nke ọkọlọtọ ahụ, a kọwara Affenpinscher nanị dị ka ihe ọ bụla na-adịghị ka Miniature Schnauzer. Agbanyeghị, ka ọ na-erule 1913, e guzobere ọdịiche dị iche iche nke ụdị agbụrụ, na a nabatara ya n'ozuzu na agba agba nke Affenpinscher kwesịrị ịdị n'okpuru-agbagburu ya.
Uche kachasị nke ozuzu Affenpinscher na Germany mere na Bavaria, Munich, na Saxony. Onwere ihe elere anya na ndebanye aha Affenpinscher tupu Agha Worldwa Mbụ, mana ọnụọgụ belatara n'oge Agha ahụ. Ndị Affenpinschers nwere ọganihu na Germany site na etiti afọ 1920 ruo Agha towa nke Abụọ.
A nabatara Affenpinscher na American Kennel Club's Stud Book na 1936, a nakweere Standard nke dabere na ụkpụrụ German ugbu a. Ndị Mgbakwunye mbu batara na Stud Book, nkịta atọ na otu nkịta, bụ mbubata German niile nke Oriakụ Bessie Mally nke Cicero, Illinois nwere. Agbanyeghị, ọ dị ka ndị na - akwadoghị Agha Worldwa nke Abụọ etinyeghị aka na ụdị ahụ dịka ọ dị na US taa.
Affenpinscher nke oge a nwere ike ịchọpụta mmalite ya site na nkịta nke Oriakụ Evelyn Brody si na Germany webata, ihe dị ka afọ 1950. Otu n'ime mbubata Oriakụ Brody, Bub V. Anwander, bụ onye America mbụ nke agbụrụ ahụ.
Njirimara & Ọnọdụ
The Affenpinscher, ma ọ bụ 'Enwe Terrier', nwetara aha ya site na ọdịdị ihu ya na-adịghị ahụkebe. Na nnukwu anya gbara ọchịchịrị, n'agba na-egbusi egbugbere ọnụ ya, na ajị ihu na-agbapụta n'ihu; ha niile na-emezi ka okwu “dị ka enwe”.
Agbanyeghị, Affenpinscher na-eme naanị karịa naanị enwe. Uniquedị a pụrụ iche na-egosipụta enweghị ike na nna nna ya; na-agbagha ma na-atụgharị ihe ụmụaka (ma ọ bụ anụ oriri).
Affenpinscher bụ otu ìgwè nke Toy Group. Ha dị site na 9 ruo 12 sentimita na akpọnwụ, ma kwesiri ịdị ihe dịka 8 ruo 10 pound. Ogologo ahụ kwesịrị ịdị ka ịdị elu, na-enye nkịta ụdị ahụ 'yiri igbe'. Uwe mkpuchi ahụ bụ wirey, ụdị nke na-achọ 'iyipụ'.
A na-akọwakarị mmụọ nke Affenpinscher dị ka 'ezigbo egwu'. Ekwuru na ha bụ “obere ruffians nwere swagger”, kwa. Ha na egosiputa ezi iguzosi ike n’ihe nye ndi ezinulo ha na ndi enyi ha, ma na-atu egwu n’egwu o bula.
Ha bụkarị ìgwè dị jụụ, mana amaara ha maka 'egwu na ọkụ'.
Dị ka ụdị ọ bụla, Affenpinschers bụ ndị mmadụ n'otu n'otu. Ha niile nwere àgwà nke ha na njegharị ha. Njirimara ndị edepụtara n'okpuru na-adabere na ahụmịhe m, ekwesighikwa ịkọwa ya na ụdị ahụ niile. Agbanyeghị, ha na-ebu banyere ya.
Ndị nkwado, site na isi ike ha, ha nwere ike isi ike ịkwụsị ụlọ.
Ezie na ọ dị ka ha nọ na 'hypo-allergenic' Atiya, ha na-awụfu n'ezie… oge ụfọdụ n'ụba.
Afffọdụ Mgbakwunye anaghị eme nke ọma na ụmụaka.
Ensfọdụ Mgbakwunye agaghị adaba na anụ ụlọ ndị ọzọ; karịsịa òké (Hamsters, gerbils, ferrets, oke, ụmụ oke, wdg…). A na-azụta ndị ahịa dị ka ndị na-eri anụ, ihe nketa ha ka na-agbasikwa ike n'ime afọ ha.
Mgbakwunye nwere echiche ịwụ elu ma ọ bụ 'ofufe' site n'ebe dị elu.
Nwa nwanyi (af-en-pin-cher)
Ha nwere agba ndị ọzọ na-abụghị oji?
Eeh. Mgbakwunye nwere ike ịbụ oji, ọlaọcha, greey, nwa na tan, ma ọ bụ ọbara ọbara.
Ha achọrọ ka ejiji dị mma?
Kwesịrị, ọ dịghị. Uwe ahụ bụ wirey, ụdị nke na-anaghị achọ ịchacha ma ọ bụ ịsa ahụ ugboro ugboro. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka a “yipụ” ha iji mee ka uwe ha gbasiri ike. Nke a bụ nkà dị mfe ịmụta. Ọ gụnyere ịdọrọ ndị nwụrụ anwụ, ntutu adịghị ntutu ull hapụ ntutu ọhụrụ na-egbu maramara. Ihe kariri ka i di njikere ime ka Affen gi yipu ihe, obere mmefu ị gha eme.
Kedu ka ha na ụmụaka si eme?
Dabere. Enwere m Affen hụrụ ụmụaka n’anya, na onye ọzọ nke na-anaghị ahụ ha n’anya. Echere m na ọ dabere na ihe a zụlitere ha, ma eleghị anya ọ bụrụ na ha nwere ahụmahụ ọjọọ. (yabụ ịbụ nwatakịrị)
C'mon, ha bụ nkịta Egwuregwu. Olee otú ha pụrụ isi sie ike?
Nnọọ. Mgbakwunye bu udiri okpukpu okpukpu, ma sie ezigbo ike. Ghara ikwu na ị kwesịrị ịgba ume nnukwu ụlọ siri ike, mana obere mkpọtụ akwụsịghị Affen kpebisiri ike.
ihe egwuregwu ụmụaka poodle vs nkuzi poodle
oke ehi mastiff na ngwakọta ụlọ nyocha
Obere onye ọzụzụ atụrụ australia tozuru oke
onye na -acha uhie uhie vs retriever ọla edo